Agụmakwụkwọ Elite Elite Elite n'efu maka obere oge | Esi m mac
Agụmakwụkwọ Elite Audio Elite bụ usoro ndekọ zuru ezu maka ndị niile chọrọ -eme ka ọkachamara E si gị Mac. Usoro a nwere ọtụtụ vidiyo nwere ngosipụta na-enye ihe ọmụma dị mkpa iji mee ndekọ ọkachamara. Agụụ Elite Audio Elite dị maka nbudata n'efu maka nbudata obere oge, yabụ ị kwesịrị iji uru a na-enye tupu ọ dịkwaghị n'efu. Ọnụ ego nke ngwa a bụ 9,99 euro.
Iji nweta àgwà E, ị ga-emerịrị mara na omimi akụrụngwa anyị nwere n'aka anyị inwe ike ime ha. Ngwa a abụghị naanị usoro na aghụghọ mana ọ bụ nchikota vidiyo vidiyo dị elu. Ka anyị na-agụ ihe dị iche iche mejupụtara usoro a, anyị ga-aghọta uru ụfọdụ nhọrọ anyị tụlere na-abaghị uru bara n'ọtụtụ oge.
The mbụ ihe nke ndekọ N'ezie e mere na guzobe ihe omuma nke di nkpa iji mee ka teepu na-eju afọ. N'ime nkuzi ndị na-esote, ngwa a ga-egosi anyị usoro ọhụụ iji dekọọ ụdị ngwa dị iche iche. Ka anyị na-aga n'ihu na nkuzi, ngwa a ga-eme nyocha oge ọ bụla iji chọpụta ma ọ bụrụ na anyị etinye ihe ọmụma nke ọgwụgwọ a na-enye anyị.
Mgbe anyị gụsịrị akwụkwọ ahụ, ọ bụghị naanị na anyị ga-amata usoro dị iche iche ndekọ, mana anyị ga-enwe ike tinye ihe omuma niile na oru site na ịdekọ egwu nke aka anyị. N’agbanyeghi na ihe ọmụmụ a zuru oke na bekee, ọ naghị esiri ike ịgbaso nkọwa na nkọwa dị iche iche enyere na ya. Ọ bụ ezie na interface bụ nnọọ improvable, ozi ọ na-enye anyị bụ nke a elu mma.
Elite Audio Recording Course App Nkọwa
Ọhaneze: 15 / 06 / 2015
Mmekọrịta: OS X 10.10 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, 64-bit processor
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Agụmakwụkwọ Elite Elite Elite n'efu maka obere oge
Macphun weputara "Nzacha maka Foto" ngwa maka Mac